यसकारण अन्तिममा रोकियो मन्त्री रामेश्वर फुयाँलको शपथ – Halkhabar kura
५ फाल्गुन २०७६, सोमबार ०८:५१
यसकारण अन्तिममा रोकियो मन्त्री रामेश्वर फुयाँलको शपथ
काठमाडौं । २०७६ माघ २९ गते बिहानै रामेश्वर फुयाँललाई बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले फोन गरे– अपरान्ह ४ बजे तपाईंको शपथ छ । मन्त्रीका लागि तयार भएर आउनु होला ।
मुख्यमन्त्रीले नै फोन गरेर शपथको समय दिएपछि फुँयाल दौरा–सुरुवालमा आइरन लगाएर मुख्यमन्त्री शपथका लागि तम्तयार बसे ।
अधिकांश अनलाइन सञ्चारमाध्यमले पनि केशव स्थापितको बर्खास्तीपछि मुख्यमन्त्रीसँगै रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा फुयाँललाई नियुक्त गरिएको समाचार प्रकाशित गरे ।
मन्त्री हुने चर्को हल्लीखल्ली भए पनि फुयाँलको शपथ उक्त दिन भएन । अर्को कल नआएपछि फुयाँल दौरासुरुवाल फुकालेर बसे ।
आखिर फुयाँलको हुनै लागेको शपथ किन रोकियो ? के आवश्यक परामर्थबिनै मुख्यमन्त्री पोडेल अघि बढ्दा यस्तो अवस्था आएको हो ? बागमती प्रदेशका नेकपा नेता तथा कार्यकर्ता अहिले प्रश्न गरिरहेका छन् । यो समाचार आजको साँघु साप्ताहिकमा छ ।
२०७६ माघ २९ गते बिहानै रामेश्वर फुयाँललाई बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले फोन गरे– अपरान्ह ४ बजे तपाईंको शपथ छ । मन्त्रीका लागि तयार भएर आउनु होला ।
Previous नेपाल प्रहरीमा अब राजीनामा दिंदा श्रीमतीको सहभागिता अनिवार्य चाहिने
Next बालुवाटार जग्गा प्रकरण: मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयासमा सरकार